Goatemalà: Mifarimbona Amin’ny Famoahana Boky TRANS 2.0 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2017 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Italiano, Français, বাংলা, Deutsch, bahasa Indonesia, English
Ho fankalazana ny Andro Manerantany ho an'ny Boky, nangataka tamin'ireo mpamaky sy ny namany miisa 50 ilay Goatemalteka mpanoratra sady bilaogera Julio Serrano [es] mba hamoaka ireo toko samihafa amin'ny bokiny TRANS 2.0 ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Nampivondrona ireo mpankafy literatiora manerantany handray anjara amin'ity tetikasa tsy mila fahazoan-dalana ity izao tetikasa famoaham-boky izao. Ahitana rohy misy ireo bilaogera rehetra mpandray anjara ny tranonkalan'ny boky [es], izay mbola fampahafantarana vonjimaika.
Nahazo fiarahamiasa avy amin'ireo mpanoratra malaza tahaka an'i Javier Payeras, El Intruso [es] sy Denise P.P. La Maleta [es] i Serrano, izay mitantana tetikasa boky maimaim-poana ihany koa antsoina hoe Libros Minimos [es]. Maro tamin'ireo bilaogera no nampiditra sary na fanazavana izay hitan'izy ireo fa mameno tsara ny lahatsoratra alefa ao amin'ny tranonkalan'izy ireo.
Ireo sombintsombiny amin'ny boky dia azo jerena ao amin'ireo bilaogy tahaka ny Notas Poco Rigurosas [es], izay ahitana tononkalo antsoina hoe “Lalana vita tara lava dia lava ny Foiben'i Amerika”, raha zarain'ny bilaogy Fe de Rata [es] amin'ny mpamaky azy ny “Marta Julia no anaran'ny bibilava Cascabel ao amin'ny valan-javaboahary” izay nampiarahana tamin'ny sary nataon-tanana. Ahitana tononkalo momba ny taxicab kosa ny bilaogy Noticias para ADios [es] ary nisafidy hanaingo izany amin'ny sarim-behivavy matory ao anaty fiara. Diario Paranoico [es] kosa dia namoaka ny “Tsia, tsy izany ny fiainana” miampy mozika amin'ny endrika lahatsary Sui Generis.
Ireo bilaogera Goatemalteka nandray anjara tamin'ny tetikasa dia ahitana ny: Utopía del Pensamiento [es], El Pepian [es], Brevediario [es], CinesobreTodo, Matilisguate [es], The Magical and Curious world of Lissy [es], La Filistea [es] ary AcheAche [es].